Tablet ကိုများအတွက် Whatsapp (iPad Mini ကို, အိုင်ပက် Pro ကို, Galaxy Tab etc) Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Tablet ကိုများအတွက် Whatsapp (iPad Mini ကို, အိုင်ပက် Pro ကို, Galaxy Tab etc) Download
Download Tablet ကိုများအတွက် Whatsapp (iPad Mini ကို, အိုင်ပက် Pro ကို, Galaxy Tab etc) APK ကို
သငျသညျတစ်ပြိုင်နက်တည်းသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို & တက်ဘလက်အပေါ် WhatsApp ကိုအသုံးပြုချင်ပါသလားဒါကယခု WhatsTablet နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှပါပဲ။
သင့်ရဲ့တက်ဘလက် WhatsTablet Install လုပ်ပြီးတဲ့ QR ကုဒ်ကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့တက်ဘလက်နှင့်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်, သောသူအပေါင်းတို့ပါပဲ။
ယခု မှစ. တက်ဘလက် & မိုဘိုင်းအပေါ် synct ဖြစ်ကြသည်။
တက်ဘလက် & မိုဘိုင်းဖုန်းအကြားလိုအပ် + အဘယ်သူမျှမကပိုအပြောင်းအလဲ
+ ကြီးတွေတက်ဘလက်ခလုတ် & display ကိုအသုံးပြုပါ
နှစ်ဦးစလုံးကိရိယာများပေါ်တွင် + Contact
အရိပ်အမြွက်: ဒီ app ကိုတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက WhatsApp ကို applications များမဟုတ်ပါနှင့် WhatsApp ကို Inc ကသူနဲ့ဆက်စပ်မရ
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကောင်းစွာတာဒစ်ဂျစ်တယ် Tab ကိုကဲ့သို့သင်၏ devices များအတွက် WhatsApp ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအံ့သြနေခဲ့လျှင်, သင့်အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာရန်အကြောင်းပါ။ သာ WhatsApp ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့ခဲ့သည့်အခါအဆိုပါရုန်းကန်ယခုကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသောကြောင့် Tab ကိုအပေါ် WhatsApp ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကို setting များကိုထံမှဖို့အတွက် QR Code ကိုထပ်တူပြုခြင်းမှတဆင့် WhatsApp ကိုမှရယူနိုငျပါသညျ။
ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ရတဲ့အခမဲ့ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်င်နှင့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးယခင်က WhatsApp ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းပေါ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အတူတူပင်ရှိနေဆဲပြောင်းပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူမဆိုပြဿနာများမရှိဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာ devices များ, မိုဘိုင်းနှင့် Tab ကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှ WhatsApp ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုပရိုဖိုင်းကိုသိမ်းဆည်းအဆက်အသွယ်လည်းပြီးသားသင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်ကိုအိုင်ဒီသို့တက်ကျောထောက်နောက်ခံခဲ့သောယခင်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ synched ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tab ကိုအတွက် WhatsApp ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုချက်ချင်းနှိပ်လိုက်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများဝေမျှအဖြစ်ကောင်းစွာတောင်းဆိုတစ်ခုပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းခံစားနိုင်သည့်ကြီးတွေမျက်နှာပြင်၏အားသာချက်ရ။
တက်ဘလက် WhatsApp ကိုများကဲ့သို့အသစ်က updates များကိုနှင့်တကွကြွလာ: -
home screen ကနေ Chat
လေယာဉ်ပျက်ကျကိစ္စရပ်များကိုဆန့်ကျင် virus detection စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို
ရှယ်ယာ menu ကနေတစ်ဆင့်ဝေမျှမယ်ဖိုင်တွေ
ယနေ့ WhatsApp ကိုများအတွက် Tablet ကို Download လုပ်ပါနှင့် WhatsApp ကို၏ပိုကြီးတဲ့အမြင်တွေ့ကြုံခံစား!
1 ။ ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ထောက်လှမ်း software ကို (ဥပမာ AVG ဗိုင်းရပ်စ်) ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိစ္စဖြေရှင်း
2 ။ စာလုံးအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ
3 ။ နောက်ခံပုံကို select
4 ။ အဆိုပါ "အိမ်စာမကျြနှာ" ဖို့ချက်တင်ကနေပြောင်း option
5 ။ ရှယ်ယာ menu ကနေတဆင့် file sharing
PS ။ မကြာမီအတိုင်းလိုက်နာဖို့ပို updates များကို ...
47.93 ကို MB
ဇန်နဝါရီ 27, 2017
Sotla - အွန်လိုင်းနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရ
အတွက် Login လုပ်နည်း ...
WhatsApp ကိုအခြေအနေ ...
Whatsapp Tablet ကိုများအတွက် Download အခမဲ့ Messaging ကို က Galaxy Tab ကိုများအတွက် Whatsapp အိုင်ပက် Air လေကြောင်းလိုင်းသည် Whatsapp iPad Mini ကိုများအတွက် Whatsapp Pro ကိုအိုင်ပက်သည် Whatsapp Tablet ကိုများအတွက် Whatsapp
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2017 မှာ 8: 44 ညနေ
အကြီးမြတ်ဆုံး site ကို